I-Honey Badger (i-Mellivora capensis) iyinhlobo ka chakide enzima, enezinwele ezinzima, futhi kungenxa yokuthi enye yezimoto zokuqala ze-Infantry yaseNingizimu Afrika ithatha igama layo kusukela egameni lesiBhunu lesi sidalwa, i-Ratel. Bathola amagama abo esiNgisi kusukela ekuthandweni kwabo ekuhlaseleni izinyosi zezinyosi, esikhathini esedlule eziholele ekuxabaneni okuningi phakathi kwabo nabakhiqizi beju.
Ama-badgers ama-Honey ane-buildy stocky nemilenze emifushane. Ngokuyinhloko abamnyama, ngesigqoko sesiliva sesiliva ezingenhla zabo, kufaka phakathi phezulu kwekhanda labo. Unomsila omfushane, obusika obambekile ngenkathi uhamba. Abantu abadala bangakhula 90 cm kuya ku-100 cm ubude futhi balinganisa u-8 kg kuya ku-14 kg. Njengama-skunks, akhulula uketshezi olunomuncu lapho ehlushwa.
Abesilisa nabesifazane bazohlangana kuphela izinsuku ezimbalwa ukuze baxoxe nabo. Njengoba kungekho sikhathi sokukhula, ama-cubs angase azalwe unyaka wonke.
Ama-cubs azalwa eyimfihlo futhi ephuphuthekile emgodini olungiselelwe yintombazane, emva kwesikhathi sokubeletha cishe amasonto ayisikhombisa. Kuzalwa eyodwa eyodwa kuphela ngesikhathi. I-cub ishukunyiselwa emgodini omusha zonke izinsuku ezimbalwa kuze kube yilapho isilungele ukuhamba nomama wayo ekuzingeni cishe izinyanga ezintathu. Amehlo ama-cubs avuleka kuphela ngenkathi eneminyaka emibili ubudala.
Ama-honeyggers ama-carnivores angenangqondo, nanoma yini encane kunalabo ababhekwa njengenyamazane, kusukela ezinambuzaneni kuya emanqeni amancane. Ngokuyinhloko abazingeli, kodwa bangase bahlabe noma badle ukudla kwezinye izilwane kanye namabheji enkunkuma.
Basebenza kakhulu ebusuku phakathi nezinyanga zasehlobo zasehlobo nasebusuku ngesikhathi sezinyanga zasebusika ezibandayo. Ezindaweni lapho zingaphazanyiswa khona, ngokuvamile zisebenza kakhulu ekuseni nakusasa.
Abantu abahlukumezayo babulala ngezifuyo imfuyo encane, izinkukhu, izimvu nezimbuzi ziyizinhloso eziyinhloko. Ngokomqulu we-Predation Management, abavame ukubulala inyamazane ngaphambi kokudla, kodwa kunalokho badla izimbobo ezidla inyamazane futhi ngezinye izikhathi ngisho nokudwengula izitho ngesikhathi isisulu sisaphila.
Amanani amancane kuphela enyama athathwa, ngokuvamile inyama ebusweni, njengemphunga, imisipha yamahlathini noma ulimi. Ukuqothulwa kuvame ukuvulwa kusuka ngezansi, negodi elikhulu emgodini wesifuba.
Abalimi badinga imvume yokubulala noma yokuhambisa ababi bezinyosi. Ama-honeygroup ama-honey awona ama-diggers amahle futhi anezigqoko eziqinile kakhulu, ezibenza bakwazi ukudabula kalula nge-wire netting. Ukuqhafaza, abelusi kanye nezilwane eziqaphayo yizona zindlela ezingcono zokuvimbela ukulahleka.
Ilebula le-badger friendly yasungulwa ukuze kubonise ukukhiqizwa uju ngendlela engalimazi badgers. Iningi lomkhiqizi wezinyosi linqobe izinkinga nabaningi bezinyosi, ngokuphakamisa imifuba emitha engaphansi komhlabathi ngokubamba imifantu emigodini. Ngokusho kwe-South African National Biodiversity Institute kanye ne-Endangered Wildlife Trust, umonakalo obangelwa ababi bezinyosi baye benqabela ngamaphesenti angama-66 phakathi kuka-2001 kuya ku-2009, ngenxa yezindlela zokuzivikela ezisezingeni eliphezulu.